Ukukhethwa kwamanoveli asondelene
Ukubuyekezwa kwamanoveli asondelene
Ukukhanya Kwasehlobo, nethi Ngemva Kobusuku, kaJón Kalman Stefánsson
Amakhaza ayakwazi ukuqanda isikhathi endaweni efana ne-Iceland, eseyakhiwe yimvelo yayo njengesiqhingi esilengiswe eNyakatho ye-Atlantic, endaweni elinganayo phakathi kweYurophu neMelika. Kube yiyiphi ingozi yendawo eyodwa ukulandisa okujwayelekile ngendlela ehlukile kwabanye...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Anne Tyler
Isikhathi sansuku zonke siyisikhala esivamile sawo wonke umuntu. Kusukela kwiminyango engaphakathi yendlu ngayinye, kukhunyulwe ukufihlwa kwesikhashana, abalingiswa esiqiniseke kakhulu ngabo. Futhi u-Anne Tyler unikezela umsebenzi wakhe kulolo hlobo lokungena okuphelele ngokwengeziwe, lowo ...
Izulu Phezulu Kwophahla, nguNathacha Appanah
Ngubani omunye oke wadedela ukukhala ngokuzijabulisa kukaMarco efuna umama wakhe. Ngalesi sikhathi iminyaka ye-protagonist, uLobo, yayizomsondeza eduze neHolden Caulfield (yebo, ibhungu elidumile likaSalinger). Futhi into ukuthi futhi isibalo sikamama ...
Akukho, ngu-Alberto Fuguet
Kunezikhathi lapho ulimi luhambisana nendaba ngokukhanya okuqonde kakhulu. Ngoba ukufuna umuntu onyamalele akudingi ukucula noma ubuciko. Ukuzithiba okulandelanayo kwenza le ndlela eya ekuhlanganeni komuntu siqu ukwakheka kobungqingili nokusondela ukusisondeza kubo bonke ...
Okuhlukile, ngu-Eloy Moreno
Ukuhlela kahle ekufundweni, okwamanje kutholakala ukuvumelana okuthile okulandisayo phakathi kuka-Eloy Moreno no Albert Espinosa. Ngoba bobabili badweba amanoveli abo ngaleso sigxivizo seqiniso mayelana nokuthuthuka kokuphila kanye nama-symphonies abo wokugcina angasoleki athakazelisa kakhulu. Kungaba into enjalo, ngenkathi ...
Umfelokazi, nguJosé Saramago
Ababhali abakhulu njengoSaramago yibo abagcina imisebenzi yabo ikhona njengamanje. Ngoba lapho umsebenzi uqukethe leso sintu esilahliwe maqondana ne-alchemy yombhalo, i-sublimation yobukhona iyatholakala. Isihloko sokweqa kwefa lobuciko noma lemibhalo bese sifinyelela lokho kuqondana kweqiniso ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi8 Okulandelayo →